Marcus Rashford oo loo Magacaabay Xidiga bishii la soo dhaafay ee Manchester United | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Marcus Rashford oo loo Magacaabay Xidiga bishii la soo dhaafay ee Manchester United
Xiddiga da’da yare e Marcus Rashford ayaa ku guuleystay abaal-marrinta xiddigii ugu wanaagsanaa bishii September kooxda Manchester United, isaga oo bishii hore 18-sanno jirkani uu dhaliyey kooxdiisa 3-gool 6-kulan oo uu ciyaaray.
Weerar yahankan ayaa shabaqa ka soo taabtay kooxaha Watford, Northampton Town iyo Leicester City, waxaana uu ku jiraa haatan qaab ciyaareed aad u fiican.
Tobbanaan kun oo taageerayaasha Man United ayaa codeeyay abaal-marrinta xiddiga bisha September ee Man United, iyada oo boqolkiiba 45 ay u codeeyeen Rashford, waxaana uu ka qaaday Ander Herrera 29% iyo Zlatan Ibrahimovic 26%.
Xiddigan da’da yar oo dib loogu soo yeedhay xulka waa weyn ee England ayaa qeyb weyn ka ah qorsheyaasha Jose Mourinho, isagoo ciyaaray 9-kulan oo ka mid ah 11-kulan oo ay kooxdu ciyaartay tartamadda oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku soo bilowday 3-dii ugu danbeeyay.
Waa markii labaad ee xiddigan Marcus Rashford uu abaal-marrinta bilaha Manchester Unietd ku guuleysato, isaga oo hantay bishii Febraury markii uu soo koray masraxa kubadda cagta.